पुरानो वर्ष २०७३ लाई फर्केर हेर्दाः महत्वपूर्ण घटना के के भए ?
पुरानो वर्ष २०७३ लाई फर्केर हेर्दाः महत्वपूर्ण घटना के के
सुर्खेत, ३१ चैत (जागरण) । भोलीदेखि वि.सं. को नयाँ बर्ष २०७४ शुरु हुदैछ, भने २०७३ लाई आजैदेखि विदाई गरिदैछ । २०७२ को तुलनामा २०७३ साल धेरै हतसम्म सुखद् नै रह्यो । धेरैजस्तो राम्रा कामका शुरुवात भए । सबैभन्दा पहिले ०७३ बैशाख १ गते ‘सामाजिक सद्भाव, शान्ति र एकताका लागि’ बाँकेको नेपालगन्जमा झन्डा महोत्सव गरियो ।
राष्ट्रपति र सभामुख जस्तो पदमा महिला रहेको नेपालमा बैशाख २ गते नेपालको इतिहासमै सुशिला कार्की पहिलो महिला प्रधानन्यायधिश बन्नुभयो । यस्तै अहिले भवानी राणा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष बन्नुभएको छ । बैशाख २ गते नै द्वन्द्वकालमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तीहरुको छानविन शुरु गरियो ।
बैशाख महिनामा अरु खास्सै त्यस्ता अप्रिय घटना भएनन् । ०७३ जेठमा भएका प्रमुख घटनाहरुलाई सरसरर्थी हेर्दा सुर्खेतमा किसानहरुले आफ्नै लगानीमा दुध डेरी संचालन गरे । कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार आरोपी १० वर्षपछि पक्राउ परेका थिए । जेठ महिनामै फुटेका माओवादीहरुको एकता भएको थियो ।
जेठ महिनामा नै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दैलेखलगायतका क्षेत्रमा रहेका पेट्रोल खानीको उत्खनन्को लागि तयारी थालेको थियो ।
जेठमा नै सुर्खेत जाजरकोटको पक्कि पुल संचालनमा आयो । पुर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुर्खेतमा रहेको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको नयाँ भवनको सिलन्यास गर्नुभयो भने सँगसँगै सिनेट बैठक सुर्खेतमै सम्पन्न भएको थियो ।
सरकारले १० खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीका वजेट सार्बजनिक गरेको थियो । वजेटबाट आम नागरिकमा उत्साह आयो भने वजेट संसदलाई जानकारी हुनुपुर्व बाहिर आएको भन्दै छानविन समिती गठन भयो ।
असारमा छिटपुट घटना भएपनि खास्सै त्यस्ता काम भएनन् । साउनको पहिलो दिन भएको प्रमुख घटना भाषा र साहित्य तर्फको क्षेत्रीय प्रतिभा पुरस्कार सुर्खेतका अग्रज पत्रकार तथा लेखक पृथ्बीबहादुर सिंहले प्राप्त गर्नुभयो ।
सुर्खेत आउँदै गरेको मकालु एयरको विमान हुम्लामा दुर्घटना भयो भने त्यसमा सवार पाइलट र को–पाइलट हाम फालेर जोगिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले केपी ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो । साउन १९ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपालको ३९ औं प्रधानमन्त्रीको रुरुवपमा निर्वाचित हुनुभयो ।
संविधान च्यात्दै हिडेका मधेसी दलहरु त्यही संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न संसदमा आएका थिए । ०७३ साउन महिनासम्म बाढी पहिरोमा परि करिव एक सय दुइ जनाको मृत्यु भयो । भने २२ जना वेपत्ता भए ।
यता सुर्खेत लगायत देशभर ०७१ सालमा आएको बाढिबाट प्रभावित व्यक्तीहरुलाई राहतमात्र वितरण गरियो । पुनःस्थापना हुन सकेन ।
भदौ महिनामा ६ नम्बर प्रदेश प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलनमा मारिएका व्यक्तीहरुलाई सहिद घोषणा गरियो । प्रदेश नम्बर ६ मा रहेको कुपेण्डे दहमा पर्यटकहरु आर्कषण बढ्दै गयो । रारा क्षेत्रमा पनि पर्यटकको घुइचो बढ्यो ।
असोजमा छिटपुटका सामान्य काम र छिटपुटका घटनाहरु भएपनि खास्सै केहि भएको देखिएन । कात्तीकमा देशभरका सडकहरूमध्ये प्रदेश नम्बर ६ मा रहेका दुई वटा सडक खण्ड धेरै दुर्घटना हुने सडकखण्डको सूचीमा परे । कात्तीकमै लोकमान विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइयो ।
मंसिरमा सरकारद्वारा सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयोगको म्यदा एक बर्ष थप गरियो । भने आयोगले खास्सै काम गर्न सकेन ।
मधेशलाई शान्त पार्न भन्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश भयो । तर संशोधनको विरोधमा एमाले निरन्तर संसद अवरोध कायमै राख्यो ।
२०७३ सालमै भएका अन्य उपलब्धीहरुमध्ये सबैभन्दा ठुलो उपलब्धी रुपमा स्थानिय तहलाई लिन सकिन्छ । जुन काम इतिहासकै महत्वपूर्ण काम हो । सरकारले बिगत करीव २५ वर्षदेखि अस्तित्वमा रहेका गाउँ विकास समितिहरुको संरचना फागुन २७ गते भंग भएको घोषणा गरेको छ ।
राजपत्रमा ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहको संरचना प्रकाशित भइसकेको छ । अब गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरु अस्थित्वमा आएका छन् ।
तिनै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचन हुदैछ । जसले स्थीर सरकारको अपेक्षा नागरिकहरुले गरेका छन् । भने यता जाजरकोटमा २४ जनाको मृत्यु भयो । १० दिनअघि मात्रै बाँकेमा भएको सवारी दुर्घटनामा परी सुर्खेतको कलाकारिता क्षेत्रका हस्ती एवम् व्यवसायी चेतन पुरीको निधन भयो ।
समग्रमा २०७३ साल सुखमय रह्यो अब २०७४ सालमा स्थानिय निर्वाचनसँगै संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा जाओस् ।